यस्ता छन् नयाँ सिजनका निम्ति ट्रान्सफरका सनसनीपूर्ण १० ठुला सम्झौता !! कसको रेट कति ?? - Experience Best News from Nepal
आधिकारिक खेलाडी स्थान्तरण सुरु मे १६ पश्चात नै भैईसकेको छ भने इंग्ल्यान्डले ठुला खेलाडी ल्याउने र पठाउने प्रणाली सुरु गर्दै छ । ठुला खेलाडी र ठुलो नगदको चलखेल सुरु लन्डनमा सुरु भैसकेको छ ।
ट्रान्सफर बजारको सुरुवातमा नै लन्डन फुटबलमा सनसनीपूर्ण र ठुला ट्रान्सफर सुरु भैसकेको छ । यस सिजनका सम्भावित र हुदै गरेका सर्वाधिक ठुला ट्रान्सफर यस्ता छन् :
१०) करिम डेमिरबे – २४ मिलियन पौण्ड (होफेनह्याम – लिभरकुजेन)
जुलियन ब्रान्डको स्थान ओगट्न डेमिरबे होफेनह्याम देखि लिभरकुजेन जादै छन् । उनको सम्भावना भने टोटेनह्याम या अन्य इंग्लिस प्रिमिएर लिग टिम थियो ।
९) थोर्गेन हाजार्ड ३० मिलियन पौण्ड (मोचेनग्लाडबर्ग – ड्रोटमण्ड )
भारी नगदमा इन्डेन हाजार्डका भाई थोर्गेन हाजार्ड जर्मन क्लब एम.ग्लाडबर्ग बाट बरुसिया ड्रोटमण्ड जादै छन् । उनले यस सिजन बुन्डेसलिगामा निकै सानदार पदर्शन गरेका थिए । उनले यस सिजन १० गोल र १० सम्भावना बनाएका थिए ।
अर्को सिजन उनि ड्रोटमण्डका अट्याकरको रुपमा देखिन्छन ।
८) राउल जिमेनेज – ३० मिलियन पौण्ड (बेनेफिका-वोल्फ्स)
जिमेनेज लोनमा नै प्रिमिएर लिग क्लब वोल्भरह्यामटनमा आवर्द थिए तर अब पूर्ण रुपमा नै वोल्फ्समा आवर्द हुने भएका छन् ।
मेक्सिको मार्फत समेत खेल खल्ने जिमेनेजले २०२३ टि-सर्टमा हस्ताक्षर गर्दै छन् ।
७) बेन्जामिन पाभार्ड – ३१.४ मिलियन पौण्ड (स्टुटगार्ट – बायर्न)
विश्व विजेता फ्रान्सका पाभार्डको उत्कृस्ट हुनर डिफेन्स खेलमा छ तर पनि स्टुटगार्टलाई बुन्डेसलिगाबाट रेलिगेसन हुन बाट भने जोगाउन सकेनन । खेलाडी सेल अन्तर्गत पाभार्ड बायर्नमा नियुक्त हुने भएका छन् ।
६) रोद्रिगो – ४० मिलियन पौण्ड (सान्टोस – रियल मड्रिड)
मड्रिडले यस सिजन भारी खर्चमा विभिन्न खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्दै छ विभिन्न खेलाडी डिफेन्स मिडफिल्डर र अट्याकर । ठुला खेलाडीमा खर्च जुटाउदै मड्रिडले अर्को सिजनको टाइटलकअ निम्ति स्थान बनाउने हेतु बाएको छ । ४० मिलियनमा रोद्रिगो देब्रे विंगरको रुपमा मड्रिडबाट खेल्ने छन् ।
रोद्रिगो १८ बर्षे एक ब्राजिलियन खेलाडी हुन ।
५) एडर मिलिताओ – ४५ मिलियन पौण्ड (पोर्टो – रियल मड्रिड)
ट्रान्सफर सम्झौता मार्च मै भैसकेको थियो भने घोसणा नयाँ ट्रान्सफर विन्द्वोमा गरिने भनिएको थियो । ब्राजिलियन उक्त डिफेन्डर मड्रिडका एक मुख्य डिफेन्डरको रुपमा मैदानमा अर्को सिजन देखिने छन् ।
४) लुका जोभिच -५८ मिलियन पौण्ड (फ्रान्कफर्ट – रियल मड्रिड)
सर्बियन लुका जोभिच लोनमा बेनेफिका देखि फ्रान्कफर्ट ७ मिलियन रकममा गएका थिए । लोनको अन्त्य भए पश्चात मड्रिडले जोभिचलाई अनुबन्ध गर्ने निर्णय गर्यो । बुन्डेसलिगाको शिर्ष पदर्शनले जोभिच मड्रिडको नजरमा परे ।
उनले गत सिजन ७० खेल खेल्दै ३० गोल गरेका थिए ।
३) फ्रान्कि डी जोंग – ६५ मिलियन (आयक्स – बार्सिलोना)
बार्सिलोनाको यस सिजनको सनसनीपूर्ण ट्रान्सफर बन्दै छन् डी जोंग । आयक्सको कडा पदर्शनबाट बार्सिलोना प्रतिद्वन्दी मड्रिड र युभेन्ट्स दुवै टिमलाई उनि आवर्द क्लब आयक्सले च्याम्पियन लिगमा हरायको थियो । उनको क्लबमा प्रवेश भए संगै समर्थकहरु उनको खेल हेर्न लालायित देखिएका छन् ।
ट्याकल, पास र लिडर योग्य खेलले बार्सिलोना निकै आकर्षित देखिन्छ । नेसन्स लिगमा समेत नेदरल्याण्डका निम्ति उनले दिएको भूमिका अनुकरणीय मानिन्छ ।
२)लुकास हर्नान्डेज – ८० मिलियन पौण्ड (एथलेटिको मड्रिड – बायर्न)
निकै महँगो ट्रान्सफर सुचीमा यस सिजन एथलेटिकोका लुकास हर्नान्डेज परेका छन् । एथलेटिकोबाट धेरै खेलाडीले यस सिजन क्लब छादै छन् त्यस मध्यकअ हुने हर्नान्डेज । वण्डाको आवथालाई हेर्दै बायर्नले ठुलो रकम लुकास माथि खर्चिएको हो ।
१)इडेन हाजार्ड – ८८ मिलियन पौण्ड (चेल्सी – मड्रिड)
यस सिजनका सर्वाधिक महँगो ट्रान्सफर बने चेल्सीका हाजार्ड । निकै सुन्दर सिजन चेल्सीमा बिताएका हाजार्ड लामो समय देखि मड्रिडको नजरमा थिए । मड्रिडको गोल खडेरीका निम्ति दुवै गोल मेसिन र प्ले मेकरको रुपमा परिचालन गर्न हाजार्डलाई अनुबन्ध गरिएको बुज्न सकिन्छ । रोनाल्डोले छाडेको छाप हाजार्डले पुरा गर्न सक्ने भन्दै मड्रिडमा उनलाई ल्याइएको समेत हुनसक्छ ।
चेल्सीबाट हाजार्डले यस सिजन यूरोपा लिग जिताएका थिए ।७ साल चेल्सीमा आवर्द रहेका हाजार्डले चेल्सीमा सुखद खेल जीवन बिताएका थिए ।
मड्रिडको चमत्कारी सम्झौता !! फ्रान्कफर्टका जोभिच मड्रिडमा
Eden HazardFrenkie de JongLucas HernandezLuka JovicRaul Jimene